Kpụrụ Republican congressman Ron Pọl na-ekwu ọ bụ ihe maka bitcoin dị ka onye ọzọ ego, dị ka ogologo dị ka ihe niile banyere ihe ahụ na-ese, virtual akpan owo bụ iwu.
Ihe mbụ Republican Congressman si Texas na nso nso chetaara CNN na mgbe ọ nọ na Congress, o webatara iwu na-ekwe ka mpi ego n'ihi na ọ kpọrọ asị asị na nke ugbu a usoro.
"M nākpọ usoro na anyị nwere. The ukara adịgboroja na-Federal Reserve. Nke ahụ bụ a nnukwu misstep na a nnukwu nsogbu. Ya mere ndị mmadụ kwesịrị inwe ikike họrọ,"Ndị Newsmax Insider kwuru.
"Ha mere na mbụ mgbe ego malitere. Mgbe ahụ, ha ẹmende ọlaedo na ọlaọcha. Na ọchịchị adia na-emegbu na ọkọlọtọ na monopolized ya. Ma bibie ya na mba a,"Ka Pọl kwuru.
"Achọrọ m legalize niile nke ndị na nhọrọ na ihe ndị mmadụ chọrọ iji dị ka ego. Ma ọ dịghị wayo. Ị nwere ike ghara ime wayo,"Ndị Texas Libertarian gwara CNN si Michael Smerconish.
Ron Paul bụ a dibịa, na-ede akwụkwọ, na mbụ Republican congressman. Paul nwekwara bụ a abụọ oge Republican president na nwa akwukwo, na president nominee nke Libertarian Party na 1988 U.S. president ntuli aka.
ViaBTC emechi ya n'ọma ahịa maka Ngwuputa contracts
Chinese bitcoin Ngwuputa ọdọ mmiri ViaBTC ka a mara ọkwa na ọ ga-emechi ya n'ọma ahịa maka Ngwuputa contracts n'izu a, a aga na-abịa n'ime ọhụrụ akụkọ a ban na ndị ọchịchị na mba.
Na a Jan. 8 okwu, ViaBTC kwuru na ọ ga-mechie ahịa - site nke ọrụ nwere ike ịzụta contracts entitling ha a ụfọdụ ego nke hashing ike (na metụtara cryptocurrency payouts) - bụ Jan. 10. Ihe kpatara ya: ụlọ ọrụ chọrọ “ịchịkwa ntule ma na-echebe ọdịmma nke anyị investors.”
“Biko rụchaa gị niile ígwé ojii Ngwuputa nkwekọrịta trading ASAP. -Ekele unu niile nkwado gị,” ViaBTC kwukwara.
ViaBTC mbụ oru ya ígwé ojii Ngwuputa ọrụ November 2016.
The mmechi abịa mgbe ọnwa ViaBTC mechie ya cryptocurrency mgbanwe omume a crackdown site Chinese ọchịchị na mba mgbanwe ilekota, a usoro nke malitere mgbe mmalite nke 2016. Ọchịchị nwekwara kwagara machibido iji mbụ mkpụrụ ego àjà (ICOs) na September.
Ma mgbe e nwere ihe ọ bụla doro anya gosiri na abụọ ihe na-yiri, ọhụrụ mara ọkwa ndị ọhụrụ na-akọ na ọchịchị na China na-achọ a nwayọọ nwayọọ shutdown nke ụlọ bitcoin Ngwuputa arụmọrụ.
Dị ka akwụkwọ-ekesa ihe karịrị izu ụka na ekewet eduga Group of Internet Financial Ize Remediation, a Chinese regulator, isi chọrọ ịkwụsị nkwado maka obodo miners, akpọ nke jikoro gburugburu ike na ala eji. Otu n'ime akwụkwọ rịọrọ ka isi kwadebe atụmatụ maka ndị dị otú ahụ a usoro site na 10th.
A nnọchiteanya si gị n'ụlọnga Xinjiang office enen na akwụkwọ si n'ịbụ eziokwu na quartz ma jụrụ ikwu n'ihu.
Dị ka n'ihu gosiri Bloomberg, miners na China na-shifting ha akara ukwu n'ebe obodo, eyeing ọhụrụ dị na Europe na North America. The ozi ọma ọrụ kọrọ na isi na China chọrọ eweputa ihe “n'usoro” shutdown nke Ngwuputa ilekota.
Bitcoin karịrị Go ...
Previous Post:About ICO: Na-achịkọta ihe ndị kasị ego n'oge iriba sales
Next Post:Telegram ICO atụmatụ